Nezvedu | Lingshou Huajing Mica Co., Ltd.
Kugamuchirwa kuHuajing Mica
Lingshou Huajing Mica Co., Ltd., yakavambwa muna 1994, ine nhoroondo yemakore makumi maviri neshanu kusvika pari zvino. Iri basa rekugadzira-rinotungamirwa kunyanya mukugadziriswa kwakanyanya kwesimbi isingasanganisirwe inosanganisira mica yechisikigo, micheka yekugadzira, zvinoshanda zvicherwa nezvimwe.Huajing inopa mhinduro dzepasirese dzakanangana neanoshanda emamineral-tech, epamusoro-mashandiro ekushandisa, pakati payo iyo mica inogadzira inovhara iyo yakazara upfu kirasi dzakateedzana. Iyo kambani yakagadzika maviri ekutsvagisa nekusimudzira nzvimbo munzvimbo dzakasiyana, inova yekupa yakasimba tekinoroji rutsigiro kune ese maindasitiri ekugadzira uye cosmetic base zvinhu. Pashure pemakore anopfuura makumi maviri ekuenderera mberi kwekuvandudza uye hunyanzvi, Huajing akapihwa "National High-tech Enterprise", "Hebei Province Special New Enterprise" uye zvimwe zvine hukama hunokudzwa. Huajing inonamatira kumugwagwa wehunyanzvi uye kusimudzira, inonamatira kune yekudyidzana kwechiratidzo chayo uye kuimisa zvigadzirwa zvayo. Inozvipira kuvaka "yepamusoro-soro uye inobatsira maminera anoshanda zvinhu kambani", iine mhando yepamusoro yezvicherwa senge inotyaira kusimudzira hupfumi hweChina nepasi rose.
Lingshou Huajing Mica Co., Ltd., yakasimbiswa muna 1994.
Lingshou Huajing Mica ine nhoroondo yemakore 27 kusvika pari zvino.
Anopfuura makore makumi maviri ekuenderera mberi kwekuvandudza uye hunyanzvi.
Huajing ine timu yehunyanzvi ine nhengo dzinoda kusvika zana, dzakazvipira kugadzirwa uye kugadzirwa kwemhando yepamusoro zvigadzirwa kubva kumicheka uye zvimwe zvigadzirwa zvemaminerari. Aya maitiro epamusoro ekushandisa emaminerari zvinhu, kunyanya anosanganisira ekuzora ekupedzisira, mapurasitiki einjiniya, pendi inoparadza kushongedzwa kwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, uye zvakasarudzika zvekuwisira zvinhu, zvakahwina nzvimbo inotungamira yeHuajing mundima yekushandisa. Iyo kambani inonamatira kune yepamusoro-mhando-inoenderera inovandudza zano uye inotora yesainzi uye tekinoroji hunyowani senge musimboti wemakwikwi. Kunyanya mumakore achangopfuura, ine iyo inotungamira tekinoroji zvakanakira uye yakapfuma inoshanda chiitiko mukugadzirwa kweyakagadzirwa mica, iko kushandiswa kweanoshanda mamineral, iyo yakazara kupora uye kushandiswa kweakaderera-giredhi zviwanikwa uye zvimwe zvinoenderana zvinhu.
Huajing inoomerera kune epamberi manejimendi sisitimu pfungwa. Yayo fekitori manejimendi yave ichitevedzera ISO9001: 2015 mhando manejimendi sisitimu, ISO14001: 2015 yezvakatipoteredza manejimendi sisitimu uye OHSA18001: 2007 yebasa hutano uye chengetedzo manejimendi system. Nekuda kwekuramba uchivandudza kwayo payo yekugadzirisa uye yekugadzira nhanho, Huajing ine vangangoita 400 vatengi pasirese, senge anozivikanwa emabhizinesi epamba Kingfa Scince & Technology, Oakley New Materials, pamwe neese anozivikanwa mabhizinesi seGerman Basf, maJapan Mitsubishi Chemical, Nippon Paint, Korea yeKorea, Hyundai, uye American Dow kemikari, nezvimwe. Masangano ese ataurwa akagadza hukama hwakareba-hwakagadzikana hwekudyidzana nekambani yedu.
Nehunyanzvi, kuvimbika, rukudzo, uye hunyanzvi sechitendero chayo, Huajing Mica iri kutarisira kugadzira ramangwana rakanaka newe nechiono chekugara uchivandudza uye kugutsa kukosha kwezvigadzirwa zvevatengi.